Sida Loogu Soo Bandhigo Sifooyinkaaga Shakhsiyeed Bandhigyada Xirfadaha ee Internetka iyo Dhacdooyinka Xiriirka 2022
Sida Loogu Soo Bandhigo Astaamahaaga Shakhsiyeed Bandhigyada Xirfadaha Onlineka iyo Dhacdooyinka Isku Xirka
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa qaar ka mid ah talooyin aad xasaasi u ah oo ku saabsan sida loogu diyaar garoobo carwada xirfadeed ee farsamada si guul leh.
Kuwa ugaarsiga u ah shaqo cusub dhib kalama kulmi doonaan inay kuu sheegaan sida xanaaqa, naf-jebinta iyo niyad jabinta hannaanka la kulanka qorayaasha, codsashada furitaanka shaqada iyo ka qeybgalka carwooyinka shaqo ay noqon karaan. Muddooyinkii ugu dambeeyay, wareysiyadan iyo carwooyinka shaqooyinkan badankood waxay noqon doonaan khadka tooska ah si loogu hoggaansamo tilmaamaha kala fogaynta bulshada loona ilaaliyo qof walba nabadgeligiisa.
Xaqiiqdii waxaa jira faa'iidooyin qaar ka mid ah carwooyinka shaqo ee khadka tooska ah oo ay ka mid yihiin inaadan la dagaallamin dad badan ama safar dheer u gashan dharkaaga ugu fiican ganacsiga, hase yeeshe, kaqeybgalka dhacdooyinkaan guriga ka socda waxay la imaanayaan caqabado u gaar ah.
1 Sida Loogu Diyaar Garoobo Carwo Xirfad Faneed
1.1 Markasta Diyaar Garow
1.2 Ku Dhaqma Iibkaaga
1.3 Dharka Si Aad U Muujiso
1.4 "Su'aalo Ma Na Joogtaa?"
1.5 Kuwa Wanaagsan Ha Sii Daayaan
Sida Loogu Diyaar Garoobo Carwo Xirfad Faneed
Weligaa ha baqin! Halkan waxaa ah shanta talo ee ugu sareysa ee ku saabsan sida ugu wanaagsan ee aad isugu diyaarin karto carwooyinka xirfadeed ee internetka iyo dhacdooyinka isku xirnaanta.
Markasta Diyaar Garow
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaad sameyso kahor shaqo cadaalad kasta ama munaasabad isku xirka khadka tooska ah waa inaad naftaada udiyaariso. Waxaa jira shan tallaabo oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad qaaddo si aad isugu diyaariso.
Marka hore waxaad ubaahantahay inaad hubiso inaad horay usii diiwaangeliso dhacdada, gaar ahaan 2020 iyadoo COVID laxiriira shaqooyin luminta shaqaalaynta xitaa shaqo kulul xitaa, meelaha loogu talagalay dhacdooyinkan si dhakhso leh ayaa loogala wareegi karaa.
Lambarka labaad: diyaarso CV-gaaga iyo shaybaarkaaga shaqada si haddii qof uu u codsado inuu u arko aad ula wadaagi karto isla markiiba!
Lambarka saddexaad: samee cilmi-baaristaada. Markaad horay isudiiwaangalisid waxaad arki doontaa shaqabixiyeyaasha kaqeybgalaya munaasabada. Baadhitaan ku samee shirkadda si aad u ogaato waxa ay sameeyaan si aad u awoodo inaad weydiiso su'aalo xog leh markaad la hadlayso wakiilladooda.
Labadii diyaarin ee u dambeysay dhammaantood waa farsamo. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso in tiknoolajiyadaadu ay lasocoto caqabada oo aad heysato keyd hadii ay dhacdo in kumbuyuutarkaaga ama wi-fi-gaagu uu guuldareysto kadibna aad timaado waqtigeeda si aad u muujiso qorayaasha waqtigaaga.
Ku Dhaqma Iibkaaga
Markaad u karkariso qaabka ugufiican, carwooyinka shaqadu waxay ku saabsan yihiin iibinta naftaada. Waxaad heshay waqti go'an oo aad aragti ku sameyn karto. Shaqaaleeyaashu waxay la kulmi doonaan sidaas, dad aad u tiro badan oo hal xirfad shaqo kuwada jira si ay fursad ugu helaan shaqo aad heshay si aad uhesho qaab aad ku istaagto.
Habka ugu fiican ee tan lagu sameyn karaa waa adiga oo ku celceliya afkaaga iyo siyaabo aad si xusuus leh isu soo bandhigi karto isla markaana u muujin karto xirfadahaaga iyo adeegyadaada. Hel saaxiib si uu kaaga caawiyo inaad ku celceliso jawaabaha qaar ee su'aalaha caadiga ah ee wareysiga ee si habsami leh u dhexgeliya sheekooyinka kuu muujiya iftiin wanaagsan oo muujinaya guushaada.
Xusuusnow muhiimadda ay leedahay in xirfadahaaga jilicsan lagu daro garoonkaaga gaarka ah. Waxaa muhiim ah in la ogaado in marka shirkaduhu shaqaaleysiinayaan shaqsi aysan ahayn kaliya inay shaqaaleysiiyaan xirfado, waxay shaqaaleysiinayaan qof bini aadam ah oo maalin walba joogi doona xafiisyadooda marka waa muhiim inaad muujiso xirfadahaaga jilicsan. Waxa kale oo aad bixin kartaa bandhigyo gaagaaban oo muujinaya oo iftiiminaya tusaalooyinka shaqadaada, guulahaaga iyo xirfadahaaga. Isticmaal qalab sida qaab -dhismeedyada soo jiidashada leh ee PowerPoint si loo dhiso bandhigyo hal abuur leh oo soo jiidasho leh si saamayn loogu yeesho kuwa qorta.
Dhawaan, shaqaaleeyayaashu waxay qiime sare u sareenayeen xirfadaha jilicsan intii ay waligood lahaayeen. Maqaalkan ka Qarsoonaa waxay muujineysaa in isxilqaanku uu liis garayo liisaska sida aadka ah loogu raadsado xirfad jilicsan suuqa.
Marka, helitaanka sheeko xariif ah oo aad ku qabatay shaqadaada oo aad ku muujisay naxariis ayaa ah hab fiican oo lagu iibiyo shaqaaleeyayaasha labadaba aqoontaada farsamo iyo xirfadaha jilicsan ee isku mar ah! Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato xeeladaha diyaarinta wareysiga, waad madax noqon kartaa halkan
Dharka Si Aad U Muujiso
Markay maahmaahdu socoto, u labis shaqada aad rabto ha noqon shaqada aad hayso. Ciyaarta marka ugu horeysa ee wax la arko ay tahay wax walba, waxaa ka muhiimsan sidii hore in loo labisto si loo cajab galiyo.
Agunaanad Forbes, Dareenkeena ugu horeeya ee qof ayaa la adkeeyay toddobada ilbiriqsi ee ugu horreysa kulanka iyo kulankan ugu horreeya, baaqyada aan hadalka ahayn afar jeer ayey ka saameyn badan yihiin waxa dhab ahaan loo leeyahay.
Marka, hubi inaad dhoola cadeyneyso, kalsoonida mashruuca oo aad sida ugu fiican ugu dadaasho inaad qeybta eegto. Uma baahnid inaad gasho suufka garabka oo buuxa, iskaashiyada honcho vibes laakiin inaad si fiican u wada eegto waa muhiim.
Taas ayaa la dhahayaa, haddii aad xiisaynayso shaqo mustaqbalka ah oo ka mid ah warshadaha hal-abuurka ah waa caadi inaad u isticmaasho dharkaaga si aad u muujiso shakhsiyaddaada waxoogaa ka badan halkii aad si buuxda u noqon lahayd midab leh, qolka guddiga.
Bandhigyada shaqooyinka internetka, shay kale oo muhiim ah in la xasuusto ayaa ah xaqiiqda ah in wax ka badan uun wejigaaga iyo dharkaaga la soo bandhigayo.
Iskuday oo gasho wicitaanada fiidiyowga markaad fadhido meel aan dhexdhexaad ahayn ama, haddii ay tahay inaad ka wacdo qolka jiifka ama meel caadi ah, hubi in qolku hagaagsan yahay oo uusan isku qasanayn. Uma baahnid inaad buuxisid Marie Kondo laakiin hubi in qaskaagu ka qarsoon yahay qaab ahaan.
"Su'aalo Ma Na Joogtaa?"
Caadi ahaan goobta loogu talagalay hakad yar, "ma wax su'aalo ah ayaad noo qabtaa?" qayb ka mid ah is-dhexgal kasta ama wareysi shaqo waa hab fiican oo lagu muujiyo shakhsiyaddaada oo aad u hesho jawaabo kaa caawin kara inaad go'aamiso haddii tani runti tahay shaqada adiga kugu habboon.
Fursad aad ku rogto qoraalka oo aad noqoto qofka wareysiga wadaya waa fursad aadan ku dhaafin. Weydiinta sida caadiga ah ee xafiiska uu noqon doono waa hab fiican oo lagu helo fikrad ah xaqiiqda shaqada iyadoo sidoo kale la isku xirayo sawirka aad ku habboonaan laheyd xafiiskaas, si habsami leh.
Weydiinta sababta shaqada loo helay waxay kaa caawin doontaa inaad barato in shirkad ay leedahay heer aad u sarreeya (taas oo laga yaabo inay muujiso shaqaale aan faraxsaneyn ama aan ku qanacsaneyn) ama haddii shirkaddu sii kordheyso!
Habka ugu fiican ee aad naftaada u taagto markii ugu dambeysay waa inaad weydiisaa 'Ma jiraan wax boos celin ah oo aad ka qabsan laheyd aniga shaqaalaynta oo aan kaa xaqiijin karo? '. Tani waxay ku siinaysaa fursad dhif ah oo aad ku ogaan karto waxa ku wareysanayahu ka fikirayo oo aad ka nadiifiso wixii khaldan ee kaa hor istaagi kara inaad u gudubto heerka ku xiga.
Kuwa Wanaagsan Ha Sii Daayaan
Ha ka baqin inaad dabagal ku sameyso ka dib carwada shaqada. Maalinta lafteedu waxay u badan tahay inay daallan tahay shaqaale qorista kaasoo la kulmay suurtagal boqolaal shaqo-doon ah.
Weydii waxa ugu wanaagsan ee lagula xiriiri karo waxay noqon doontaa ka dibna, maalmo yar ka dib, la xiriir emailka, LinkedIn ama wax kastoo ah isgaarsiinta doorbidku yahay. Edeb yeelo oo uga mahadnaq waqtigooda iyo khibradooda. Xusuusi iyaga wadahadalkaaga oo weydii wax ku saabsan tallaabooyinka xiga ee ku saabsan nidaamka dalabka.
Haddii aad raacdo tilmaamahan oo dhan shakhsiyaddaada, xirfadahaaga jilicsan iyo aqoontaada farsamo waxay ku xidhan yihiin inay ka soo dhalaalaan oo ay ku qancaan qorayaasha ama wakiillada shirkadda. Haddii wax walboo hagaagaan, carwadaada xirfadeed ee xigta ee khadka tooska ah waxay noqon kartaa talaabada ugu horeysa ee kaa qaadeysa wadada loo maro xirfad guuleysi iyo abaal gud leh.
Previous Post:Ku Samee Lacag Akhriska Iyo Iibinta Buugaagta Online
Post Next:La-taliyayaasha Ogolaanshaha Kulliyada ee ugu sarreeya ee la shaqaaleysiiyo 2021